I-Apple isungula i-beta yesibini ye-iOS 11.2.5 | IPhone iindaba
UApple ukhupha i-beta yesibini ye-iOS 11.2.5
Inkampani yaseCupertino iyaqhubeka nokusebenza ekuphuculeni i-iOS 11, inkqubo yokusebenza ethi, nangona ibonakalise ukuba yeyona ibandakanye ezona zinto zisebenza kuyo yonke imbali ye-iOS, ayinakuphikiswa ngokubhekisele kwintsebenzo, kwaye oko kukuthi abasebenzisi baqala ukuphulukana nethemba Iinguqulelo zenkqubo.
Ngelixa iApple ikhuphe i-iOS 11.2.5 kwilixa elidlulileyo ngaphandle kwesaziso sangaphambili, baqhubekile besebenza kule nguqulo esingakhange siyifumane inkuthazo. Nokuba kunjani, ukusukela ngentsimbi yesi-19 ngokuhlwa ngexesha leSpanish, le nguqulo ye-iOS iyafumaneka kubaphuhlisi.
Mhlawumbi usithi i-iOS 11.2.5 uhlaziyo lunokuqwalaselwa phantse njengonconyiso, kwaye ayisiyiyo kuphela ukuba asifumananga kuphucuka kwintsebenzo, kodwa oko Akukho sombululo kwezona ngxaki zicace gca zokuba i-iOS 11 iveza uhlaziyo olunye emva kolunyeSicinga ukuba iqulethe ukuphuculwa okuncinci kwinqanaba lokhuseleko, kuba yintoni imisebenzi, sele silindele ukuba ayenzi njalo. Ngendlela efanayo naleyo sisalinde ukubona oko i-AirPlay 2 ifanele ukuba ... ingaba i-Apple izakuyibona nakweyiphi na i-beta ngaphambi ko-2018? Yonke into yalatha kwinto yokuba ngokwesantya sohlaziyo, impendulo icace gca.
Njengokuba usazi, Kuya kufuneka ube ngumphuhlisi ukuba ufuna ukukhuphela i-iOS 11.2.5, nangona sele ikwi-beta yayo yesibini sinokucinga ukuba kule veki (okanye nangomso) bazokugqibela ngokwazisa ingxelo yoluntu efanayo, ewe ewe onokufaka nawuphi na umsebenzisi onemizuzu emihlanu yasimahla kwaye ngubani ofuna ukufaka iprofayile ebeka iApple kwinkonzo yabo bonke abasebenzisi bayo. Ngeli xesha siza kuqhubeka nokuhlalutya i-iOS 11.2.5 ngokweenkcukacha ngenjongo yokufumana iinkcukacha ezinolwazi lokwenyani, kodwa inyani kukuba ithemba lokuba i-iOS izakubuyela kwinto eyayinayo nakwiitheminali "ezinamandla" ezinje nge I-iPhone 6s iyancipha kwaye incinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UApple ukhupha i-beta yesibini ye-iOS 11.2.5
Ndingomnye wabasebenzisi abaphoxekile kukuhlaziywa kwale IOS 11, ndiyazi ukuba basebenza nzima kakhulu ukuvuselela inkqubo, kodwa kufuneka bajonge ekuphuculeni izixhobo, ukusebenza ngokubanzi kwaye kunjalo, nebhetri. Konke okugqibelele.
Izimvo njengawe. Ndiye ndathoba isoftware kwi-iOS 10.3.3 ukuba isebenze kakuhle kwi-iPhone 7 yam nakumama.
USaurik uqinisekisa ukuba uyasebenza ekunikezeleni ngenkxaso ye-Cydia kwi-iOS 11
I-Apple ibambe intlanganiso yabanini zabelo yonyaka eSteve Jobs Theatre